Inona no atao hoe Marble Liquid? - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Inona ny marbra misy rano?
Inona ny marbra misy rano?
2021 / 05 / 30 FisokajianaInterior design 6363 0
Heverina ve fa ity sary etsy ambony ity dia singa iray amin'ny fisehon'ny rano? Diso, sombina marbra ity.
Misy karazana teknika fanodinana vato. Miaraka amin'ny fampivelarana ny siansa sy ny teknolojia, ny fanodinana ireo vokatra asa-tanana. Namaky ny eritreritsika voajanahary io.
Marbra ho iray amin'ireo fitaovana sarotra indrindra. Malaza be eo amin'ny tsenan'ny fitaovam-panorenana izy io, ary mety tsy ho azonao an-tsaina izany indray andro any. Ny marbra mafy dia mety ho lasa malefaka sy tantaram-pitiavana. Ohatra, ity sary manaraka ity.
Eny, mamaky azy tsara ianao. Izany no vokatry ny marbra vita amin'ny velaran-drano. Marbra tsy manam-paharoa toy izany, mampamirapiratra ny mason'ny olona tokoa. Marbra misy rano io. Androany dia takatsika hoe inona ilay marbra vita amin'ny rano avy amin'ireo lafin-javatra efatra manaraka.
01: Inona ilay marbra misy rano
02. Ny toetra mampiavaka ny marbra misy rano
03. Ny fananganana sy ny fametrahana marbra misy rano
04. Fanehoana marbra marihitra isan-karazany
Inona ilay marbra misy ranoka
Ny marbra miaro tena dia vato voajanahary mafy amin'ny alàlan'ny tsofa, ny sary sokitra CNC, ny famolahana tanana, mba hamoronana fanjakana liquefaction.
Ny famaritana ny vokatra dia namboarina mifanaraka amin'ny haben'ny tranokala. Ny hateviny dia mety 20/30 / 50mm, ary ny lanjan'ny 20mm dia 55kg / ㎡.
Fitsaboana ambonin'ny tany: voalamina / matte
Fampiharana mahazatra: ravaky ny kanto, vokatra ao an-trano, rindrina sy gorodona sns.
Toetra mampiavaka ny marbra misy ranoka
- Ny fitambaran'ny tsofa tsipika sy ny sokitra CNC miaraka dia afaka mamorona vato misy effets 3D.
- Ny endrika mahafinaritra sy azo tanterahina miaraka amin'ny halaliny sy fironana samy hafa dia azo soratana eo ambonin'ny vato.
- Miaraka amin'ny famolavolana volon'osy artifisialy dia haneho ny endrika voajanahary amin'ny firafitra.
- Ao anatin'ny taratry ny hazavana sy ny aloka dia asongadino ireo refy mahafinaritra, mamorona atmosfera kanto.
Any Frantsa, ny mpanakanto romantika iray, Mathieu Lehanneur, izay tia ny ranomasina manga, dia nitsidika ranomasina 50 teto amin'izao tontolo izao, na lehibe na kely. Ny firavaka miafina amin'ireo fahasamihafana miloko ireo dia nanome aingam-panahy ho an'ny asany.
Mampiasa marbra ny mpamorona hanehoana ny ranomasina manga ao an-tsainy. Manomboka amin'ny famokarana zavakanto ka hatramin'ny famolavolana maritrano lehibe dia mampiasa ny marbra miavaka tokana izy mba hamoronana asa-kanto miavaka.
Ny tena solontenan'ny sangan'asany dia ny andian-dahatsoratra "Liquid Marble", izay ezahan'i Mathieu hatsiaka fotoana fohy misy ranoka mavitrika miaraka amin'ny akora mafy. Ny ranon-javatra, ny famirapiratana ary ny fikorianan'ny ranomasina dia naseho tamin'ny fomba mazava, namorona vokar-maso mahatalanjona!
Ohatra, ity fametrahana zavakanto manaraka ity dia antsoina hoe "Loire River". Ny tokotanin'ny lapa taloha dia vita amin'ny vatokely tsara tarehy ary misy rano manga iray hiseho. Ny fisehoan'ny rano mifangaro sy hazavana ambanin'ny tara-masoandro dia mino anao fa vita amin'ny marbra maitso monolithic avy any Goatemalà izy io.
Izay tokony ho ony riaka dia namboarina ho sombina. Sombin-javatra kely an'ny Loire bitika miampita ny tampon'ny zaridaina ary miditra lalina amin'ny tany mba hampiharihary ny dikan'ny loharanon'aina ony. Mahatonga anao hijanona amin'ny lalanao izany.
Mampiasa rindrambaiko 3D sarotra izy hanamboarana ny onjan-dranomasina mitopatopa entin'ny rivotra, avy eo mampiasa sary sokitra mekanika amin'ireo paikady, avy eo manosotra tanana mba hitarika ny tarehin-javatra ho hita taratra amin'ny sary sy mamirapiratra. Io dia ahafahan'ny mpijery mivezivezy eo anelanelan'ny rafitra famolavolana mirindra sy ny fiatraikany ara-nofo.
Ny fametrahana tantaram-pitiavana toy izany koa dia niditra tao amin'ny Musée des Arts Décoratifs any Paris. Sahabo ho 4 metatra ny halavany ary 1.7 metatra ny sakany. Ny rindrina sy ny gorodon'ny habaka fampirantiana malalaka dia maivana loko, mifanohitra amin'ny fametrahana mainty mainty toy ny fôsily.
Ny fametrahana dia mampiseho sary tsy azo ovaina momba ny ranomasina, manahaka mazava tsara ny endrika rano mikororosy namboarin'ny rivotra malefaka.
Ny fototry ny fametrahana dia 30 sm ihany ny haavony. Na mijery ambany avy any ambony na akaiky, ny fametrahana dia manaitra sy mampieritreritra.
Fananganana sy fametrahana marmora misy rano
a. Teboka fananganana
▼ Fijerena tsipika handrafitra ilay prototype
▼ sary sokitra CNC handrafitra ny tampon-tendrombohitra sy lohasaha
▼ Fandokoana tanana ho amin'ny fahalavorariana farany
▼ Ny lakilen'ny fananganana: onja voajanahary sy tampon'ny tampon'ny
b. Dingana fametrahana
Mitovy amin'ny rindrina vita amin'ny marbra mahazatra sy ny fomba fananganana gorodona (paty mando na mihantona maina. (Raha ny hatevin'ny fanapahan-kevitra dia mihoatra ny 30mm rindrina no azo heverina fa mihantona maina)
Fomba fametahana lena: fametahana ny faka-bozaka → hamafa ny sosona mitambatra (simenitra simenitra) → fananganana vato → fitsaboana antsipirihany → vita.
Fomba fanantonana maina: fametrahana rindrina → vato mialoha ny laharana → filalaovana fanitarana → fametahana taolana vy, fanitsiana → vato raikitra → fiarovana lakaoly → feno
Fanamarihana momba ny fanamboarana: Ny fametrahana aorian'ny fahatongavan'ilay vokatra ao amin'ilay tranokala, amin'ny alàlan'ny fomba fanenomana matevina, dia azo ampirimina na tsia.
▼ Toerana fananganana famokarana zavakanto Loire River
▼ Toerana fanamboarana fanaka marbra misy rano
Fomba isan-karazany amin'ny fanehoana marbra ranoka
Ity vokatry ny zavakanto marbra ity dia manambatra ilay rindrambaiko vaovao miavaka momba ny vanim-potoana vaovao 3D, sary sokitra milina ary famolavolana tanana nentim-paharazana, mampanjavozavo ny fampisarahana ny endrika sy ny zavakanto.
Ho fanampin'ny fametrahana zavakanto, ny fampiasana ireo vato misy rano ireo amin'ny fanaka vokatra sy ny habaka anatiny dia afaka manasongadina ihany koa ny atmosfera kanto sy kanto voajanahary.
Mpamolavola amin'ny alàlan'ny marbra mihitsy, miampy ny antsipirian'ny fanodinana. Avelao io sombin-marbra io, izay vato tsotra fotsiny, hivadika ho ranomasina mamirapiratra.
Previous :: Inona ny jiro manintona andriamby? Next: Fandraisana an-trano 170㎡ Solo any Beijing, trano anajika fanaingoana ara-mekanika ho an'ny olona mpampita vaovao momba ny fiara
2021 / 08 / 15 3495
2021 / 08 / 15 4375
2021 / 08 / 15 3868
2021 / 08 / 14 3591
2021 / 08 / 14 4026
2021 / 08 / 14 3391